SOBA YEROO AMMA QAMOONI MOTUMMAA ABO FI UMMATA WALITI BUSUF HOJJACHA JIRU. Lakkii yaa ODP(OPDO)bayyeen kessan Oromoo tahu battaniis xuriidhuma imimman Oromoo sodaadha!! – Kichuu
SOBA YEROO AMMA QAMOONI MOTUMMAA ABO FI UMMATA WALITI BUSUF HOJJACHA JIRU. Lakkii yaa ODP/OPDO, bayyeen kessan Oromoo tahu battaniis xuriidhuma imimman Oromoo sodaadha!!
Hubadha Hamma Ammati ololii Waraana bilisummaa Oromoo irraati demma jiru olola sobatii WBOn loluf Osoo hin tanee meshaa hin hikanuu jechaa jira Oromoon meshaa hidhachuu Qabaa male Hikachuu hin qabuu jechaa jira Garuu ololii fulla media irraati demma jiru akumma bara 1991 fi 92 sanitti Ummaata fi Waraana bilisummaa Oromoo walitti busuuf Shirii olola bayyeen Godhama jira Mee Osoon Shira Olola yeroo amma kana
hojjatam jiru hin dubanee dura Shira bara 1991 fi 1992 hojjatamee haa isiin yadachiisu Qamooni Motummaa yeroo sanii akkumma Araa kana humna waraana maqaa ABOtin ijjarani yeroo bakka waraani bilisummaa Oromoo WBON SOCHAA tureti Waraanii Qamaa motumnaatin irraame sun Maqa waraana bilisummaa oromootin Ummata Kenyaa Akka male godha ture Fakkenyaaf gochaa akka baddannoo fi balee keessaatti hojjatama ture fi naannoo oromiyaa gara gara keessaatti maqa
WBOtin hojjacha turan sani gochoota kan walif himmun waan nama barbachiisu Anati hin fakkattu malif Jenan Motummaa TV irraati dabarsaa ture kanis Namooni Hindii Gura Qabaa wan tehef jecha yeroo sanitti Boji,ammatooni Dargii kana maqa Oromootin Motummaa wayyaanne TPLF waalin hojjacha turana keessaa Namooni Lamma kana Amma caasaa Motummaa keessaa jirufi hooganaa Dhaba ABO kan yeroo sanii Kana yeroo Amma kana Maqa dhaba ODF biyyaa senee kana walin olola sobatin
Waraana bilisummaa Oromooti fi Ummata Oromoo jiduuti shirii olola Gare L,K,A tiin hojjatame ummata Oromoo sobani akka ummaani waraana isa dhibee biyyaa basan tasisani turan hubadha yeroo amma kanas Namooni gare L, K, A jedhamu kun waaliti Debi, ani Qamaa Motummaa walin hojjacha jiran Kanaf waaligalaten ABO Fi Motummaa jidutti godhame gamma dhibaa siyaasaati Gedarame Dhibaan kun mali jechuun keessaan hin Ollu Shira Olola yeroo amma ABO humna waraana harkaa Qabuu kana irraati Godham jiru kana akkumaan asii Olitti shira olola kijibatiin
WBO ummata Oromoo adaan basani turan saniti yeroo amma kanas Ololota sobatin Dhabichaa Ummata Oromoo ABO fi ummata walitti busuuf hojiin hojjatama jiru wan isa dura walin gara garumma hin Qabane tahun isa bekkamadha. Gara garumman yeroo sanitti fi kana amma yoo jirate Waa lama Qofa 1 Motummaa yeroo sani Gaafiwaan ummata Kenyaa Gaafacha Ture akka Motummaa amma kanati hin debisuu Ture 2, wana ummani gaafachaa ture keessaa kana ummaan keenyaa itti gammadan tokko tokko hin hojjattan ture 3,
Dhaba ummata Oromoo ABO maqa irraa jiijirani Shanee jechunis hin jiru ture garuu haa taa,uu male Madii Olola modern tehe male akkasummati jira Mee haa ilalu olola yeroo amma kana Namoota olola oofa,a jiru kana nama kuma 6 oreteshina keenanifi mindaa Qarshii kuma 2 irraa hamma 6 keenanifi Olola irraati babasani Koran
. Jaal Daawud ibsaa Oromoo miti sobs
. ABO’n tigire waliin hojjeta soba
. Abbaa torbeetu qaabame soba
. WBO’n Baankii saame soba
. Walitti Bu’iinsa Beenishanguliif wallaagga gidduutti uumamef sababa kan ta’e WBO dha 😂
Konorlee Gammachuu Ayyaanaa tikraya Dhaqee
1. ONN damee maqaleetti banatee,soba.
2. loltoota Asmaraa dhufan keessa Tigireetu jira,soba.
3. Getaachoo Asaffatu WBO gargaara,soba.
4. “Lakkoofsi WBO hidhatee jiru 50-60 ti!” Alamuu Simee
“Lakkoofsi WBO harka kennatee 179 gahe” Toleeraa Caalaa
1/ Geetaachoo Asffaa qabamee Sudaan jira jette, kijiba tahuu Uummanni barraan achumaan bade jette,
2/ Waajjirri /Studion ONN Maqaaletti baname jette, qulfiillee harka Debretsion fudhatan jettee kijiba adii kijibde. Garuu yeroo qulfii fudhatanillee nu argisiisuu hin dandeenye.
3/ WBO Eretiraa gale keessaa 600 Tigreedha jedhan, ulaagaa kana isaan jechisiisuu danda’es hin ibsine
4/ Kolonel Gammachuu Ayyaanaa osoo Finfinnee jiruu Maqaale jira jedhanii soba aduu guyyaa qaanii tokko malee gad naqan
5/ WBO fi Wayyanneen waliin nuu waraanaa jiru jedhan, garuu ragaa qabaatama kenna yoo jennun cicc jedhan.
Gochaan kun hardware Oromoo keesatti hojii fafaadha. kanaaf, hundii keenya fudhachuu dhiisne gocha kana irra akka isheen of qusatuuf mormuu qabna. OPDON SUUFII uffachuu malee dhugaa haasa’u hin beektu.Mee ilala gaa ololii kun hundii isa AKUMMA BARATAN SANITI ADD BILISUMMAA OROMOOTI FI UMMATA OROMOO JIIDUTI MADA, umanii ummata fi dhabaa dudafi gara waliti godhuf akka tehee wan wal nu gaafachisu miti .IJIFANNOO UMMATA OROMOO KUTA 2ffaan itti fufa .A,d m,s irraa
#WBO-Abdiin Oromiyaa guddaa dha.
Miseensota WBO mooraa Ardaayitaa turan magaalaa Jimmaatti simataman
By Abdi Berhanu
“Jaal Galaasaa Dilboo, Jaal Lenco Lataa, Jaal Dima Noogoo, Jaal Dawud Ibsa fi kanneen biroon walumaan QBOf jedhanii ofii wareegamanii Oromo fi Oromiyaa bilisoomsuuf qabsaayaa turani. Har’a gaafa isaan biyya galan simannaa Ummani Oromoo godheefii argineera. Garaa garummaa simannaa isaanii gudduu jirus ilaalleera. Garaagarummaan kun kan argame Ummanni Oromoo Jaal Dawudiin Jaal Galaasaa yookaan Jaal Leencoo caalaa waan jaallatuuf miti. Garaagarummaan simannaa kan dhalate simannaa namoota dhuunfaaf taherratti hundaahuun miti. Ummanni akkuma abbaan fedhe ka’ee haasayu utuu hin taane kayyoo isaa siritti waan hubatee argu dha.
Dubbiin dubbii kayyooti. Ummanni Oromoo Dr. Abiy fi Lammaa utuu akkas jaallatuu kan WBO faana hiriiree dhumuufis dubbiin dubbii kaayyooti.
Ega ABO ganamaa, ABO galgalaa ABO minxiqirsee jechuu dhiisaati ABO QBOf cichee wareegama qaqqalii baasee fi baasaa jiru kana hundi keenya bira dhabbannee, rakkoo jiru sirreefachaa QBO akka fiixaan baasnuu fi roorrisa halagaa bara dheeraa kana ofirraa kaasuu qabina. Abbootiin Qabsoo Oromoo bifa adda addaan jiranis kana hubatanii qalbii fi tasgabbiin mariiyataa rorroo saba keenyarra jiru kanaaf xumura akka goonu akka hojetan an amana.”
Raayyaa Ittisa Biyyaa keessa warra ta’e jedhee ummataa fi mootummaa walitti buusuuf hojjechaa jirutu jira. Ragaa malee dubbachaa hin jiru. Rogeeyyiin TPLF yoo xiqqaata dhalattoota isaanii RIB keessa jiraniif guyyaa lama dura irraa qabee Tigirinyaadhaan dhaamsa dabarsaa turan. ”Ajaja hogganni keessan kennu osoo hin taane dantaa paartii keessan TPLF akka gargaarutti tarkaanfii fudhaa” jechaa turan. Kun maal jechuu dha? Yeroo maqaa WBO adamsuu jedhuun bobbaafaman isa bahaniif dhiisanii ummata siiviilii (hidhanoo hin qabne) ajjeesuu fi mana irratti gubuu dhaan akka ummanni hammeenya mootummaa kana laalee irraa abdii muratu gochuu jechuu dha. Kan Kibba Oromiyaa fi Lixattis dabree dabree dhagahaa jirru dhugaa kana ragaa bahaa jira. Kanaafuu mootummaan yeroo waraana bobbaasu loltuun bobbaafame maal raawa’ataa jira hoo kan jedhu jabeessee qorachuu qaba. Warra ummata siiviilii irratti tarkaanfii fudhatan laalessanii adabuun dirqama ta’a.
ABO malee qaamni hidhate hin jiru hin jenneeyyuu addisiyyeen firri warra wannoo obboleessi intinaa
Amaarri akkasiin hidhattee geerrartu kuni hoo eessaa bahan?
Wallaggatti Ummanni Aariin guutamee wajjira ABO dhaqee gaafii gaafachaa jira.
(SBO – MUDDE 29,2018) Godina Jimmaa magaala Jimmaatti waajjirri ABO akka hin banamneef gufuulee adda addaatu ka’amaa jira. Guyyaa har’aas haalli hin barbaachisne mul’ateera. Kana irratti dargaggoo Khalid Jamaal haasofsiisnee jirra. Kunoo tii caqasaa.
ODP(OPDO) Style Democracy:Godina Jimmaa magaalaa JImmaatti waajjirri ABO akka hin banamneef dhiibbaa fi doorsisi miseensotaa fi deggertoota ABO irratti godhamaa jiru nama gaddisiisa. – https://t.co/Np2LG3NL5Y pic.twitter.com/7YlZ1EYBJZ
“Kan du’ee Oromoo kan du’arraa oolee hayyuu Oromooti,Kan Iyyuun dachii sochoosuu Amaara